June 11, 2019 Cele Love 0
မကြာခဏဇက်ကို တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်အောင် ချိုးတတ်သူများသတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ်.. ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ ဇက်ချိုးတာကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ မကြာခဏလည်း ချိုးတတ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျုတာရှေ့တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်းထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ၊ တစ်နေကုန် စာထိုင်ရေးနေရသူတွေ က များသောအားဖြင့်ဇက်ချိုးတာကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ အညောင်းပြေအညာပြေ လို့သဘောထားကြတာမို့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ အခုတော့ အဲ့ဒီလို […]
ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေကို လုံးဝလျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက် တစ်ခါတလေမှာ ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်မရှိဘူး၊ ခံစားချက်မရှိဘူးလို့အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေကို လုံးဝလျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် နော် ….. (၁) လူတွေရဲ့စိတ်ကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ် ” ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲ နေတတ်တဲ့သူတွေလို့ ထင်ရတတ်ပါတယ်။ […]
အထူးအားထုတ်စရာမလိုဘဲ အလိုလိုကို ဆွဲဆောင်မှုအားပြင်းနေတဲ့ ရာသီခွင် (၃) ခု တစ်ချို့လူတွေဟာ မွေးကတည်းက ကံကောင်းကြပါတယ်။ ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုဘဲ ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာမျိုး တစ်နည်းအားဖြင့် မတောင်းပဲ ပြည့်တဲ့ဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ကြိုးစားစရာမလိုဘဲ အလိုလို Sexy ကျနေတဲ့ ညှို့အားအပြင်းဆုံး ရာသီခွင် (၃) ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုရှားရှားပါးပါးရာသီခွင်ထဲမှာ သင်ပါနေရင်တော့ […]
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ် သိတတ်တဲ့သူတွေသာ ရမယ့် ကံကောင်းခြင်း (၅) မျိုး လူကြီးမိဘတွေကို သိတတ်လိမ္မာရင် ကံကောင်းမယ်ဆိုတာ တော်တော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်လုပ်တဲ့သူကတော့ နည်းပါတယ်။ တကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ်ကို သိတတ်တဲ့သူတွေ ရရှိမယ့် ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် ……. (၁) လမ်းမမှားတော့ဘူး ” […]
ဆရာဝန်၊ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ အထွေထွေ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရ ဆရာဝန်၊ မော်ဒယ် နန်းမွေစံအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှ အထွေထွေဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ကာ ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ အနေနဲ့ သူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဆေးကုသခွင့် […]
အသက် ၂၀ မှာ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သည့် အကြောင်းရင်း ၈ ချက်… ကျွန်မတို့ဟာ လူသားတွေ ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝလက်တွဲဖော်ကို မက်မောတောင့်တ ကြပါတယ်။ အချိန်တွေကို အတူကုန်ဆုံးဖို့ အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ဖို့ ရုပ်ရှင် အတူကြည့်ဖို့ ဘဝကို အတူ စွန့်စားဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိနေပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ […]
ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါ အတိုအရှည်အား လက်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင် For Zawgyi ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါ အတိုအရှည်အား လက်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်တဲ …. ။ ယောက်ျား- အင်္ဂါ အတိုင်းအတာကို လက်ဝါးက ပြနေသည်။ ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ ဖတ်ပီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပေါ့နော် …. ။ […]
သင်အသက်ကြီးနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သင်ကို အသိပေးနေတဲ့ အချက် (၅)ချက် လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်ကြီးလာမှန်းကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ ကိုယ့်အသက်ကို မှတ်ထားရမှာ ကြောက်လေပါ။ ဒါပေမယ့် သင်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲသတိပေးနေပါတယ်။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းတွေ မင်္ဂဆောင် ၊ ကလေးမွေးသွားတာမျိုး ၊ ကလပ်တွေ […]